Aasidda meydka | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Mowdka iyo Janaazada/Aasidda meydka
Waxaa sharci ah ku aasidda meydka arlada sida ay tahay caadada badi shucuubta arlada laga soo billaabo waqtigii labada ilmood ee Aadam  (Qaabiil iyo Haabiil), waxaana ku sugan maamusid dhan ee meydka, iyo ka fogeyn wax dhiba dadka nool.
Waxaana kaafi ah xagga aasidda qaddar ka dhowri kara meydka dugaagga iyo inuu daad qaado ama ay ka soo baxdo ur xun.
Qabriga ama waa beer ka mid ah beeraha jannada, ama god ka mid ah godadka naarta
Waxaa la doonayaa in la tixgeliyo dhowr umuurood:
Waxaa fiican oo ajar badan in la dedejiyo aasidda meydka kaddib marka la meyro oo la kafno oo lagu tukado.
Waxaa sunno ah in hoos loo qodo qabriga oo la ballaariyo inta loo baahan yahay, waxaase kaafi ah waxa cesha urka, oo ka dhowra qoditaanka dugaagga iyo inuu daad qaado qabriga iyo meydka.
Way bannaan tahay inuu qabriga ahaado qaabka iilka ama qaabka jeexdin, dal kastaa wuxuu leeyahay wax ku habboon ee waafaqsan dabeecadda arlada iyo adkaanteeda.
Waxaa fiican oo ajar badan in loo dhigo meydka dhinaciisa midig oo loo jeediyo xagga qiblada
Waxaa fiican oo ajar badan inuu yiraahdo qofka aasaya kaddib marka uu dhigo meydka “Bismillaah wacalaa millati Rasuulil Laah” (At-Tirmidi 1046, Ibnu Maajah).
Waxaa la doonayaa in lagu daboolo meesha meydka – ha ahaado qabrigaa ii lama jeexdin- bulukeeti ama qasbad ama dhagax iwm ka hor inta aan lagu rogin ciidda meydka dushiisa.
Waxaa fiican oo ajar badan qofka ka soo qayb gala aaska inuu ciidda wax kaga shubo meydka, wuxuuna Nabigu s.c.w soo qaatay seddex xantoobo oo ciid ah oo ugu shubay meydka gacantiisa”. (Ad-Daaraqudni 1565)
Waxaa fiican oo ajar badan in kor loo qaado qabriga qaddar dhan taako si loo ogaado, si ay dadka uga fogaadaan inay dhibaateeyaan ama ku dul socdaan, waxaana xaaraan ah in aad loogu fogaado dhismaha qabriga, waxaana soo arooray xadiisyo reebaya arrinkaa, waayo waa wax keeni kara weyneynta meydka iyo in loo shariik yeelo Allaah Cazza Wajalla,
Waa laga fiican yahay in meydka lagu aaso taabuut (oo ah sanduuqa la geliyo janaazada), wuuna bannaan yahay arrinkaa haddii loo baahdo.
Waxaa fiican oo ajar badan aaska kaddib in dadka ka soo qayb gala ugu duceeyaan meydka sugnaansho iyo dambi dhaaf qof walba gaarki, Nabigu  wuxuu yiri kaddib aaska mid ka mid ah asxaabtiisa: “U dambi dhaaf dalba walaaalkiin oo u barya sugnaansho, waayo waxaa hadda ku socda su’aalo” (Abuu Daawuud 3223)
Waxaa naloo jideeyey inaan ugu duceyno meydka dambi dhaaf iyo naxariis iyo in lagu sugo xaqa aaskiisa kaddib